Listening ဆိုတာ လေ့ကျင့်သင်ယူရမည့် အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Skill တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် စနစ်တကျ အချိန်ပေး သင်ယူလေ့ကျင့်နိုင်တယ်ဆိုလျှင် တိုးတတ်လာနိုင်ပါတယ်။
၁. English အသံထွက်ကို နားယဉ်အောင် ပြုလုပ်ရပါ့မယ်။
English ရုပ်ရှင်များများကြည့်ပါ။ ကြည့်တဲ့အခါမှာ မြန်မာစာတန်းထိုးတာကို ဖျောက်ကြည့်ပါ။ English subtitle ကိုလည်း ဖျောက်ကြည့်ပါ။ English သီချင်းနားထောင်ပါ။ နားထောင်ဆိုသည့် နေရာမှာ ဘာကို ပြောသွားတယ်ဆိုတာကို နားလည်အောင်ကြိုးစားပါ။ အပြန်ပြန်ဖွင့်ပြီးနားထောင်ကြည့်ပါ။
၂. BBC သတင်းတွေ၊ အသံလွှင့်တာတွေနဲ့ ရေဒီယို နားထောင်ပါ။
English သီချင်းတွေပဲ ထည့်ထားလိုက်တယ်။ English သီချင်းတင်မကပဲ IELTS listening audio file တွေပါ ကူးထည့်ထားလိုက်ပါ။ အချိန်ရတာနဲ့ အဲ့ဒါကိုပဲ နားထောင်ပေးပါ။ ခရီးသွားလည်း အဲ့ဒါကိုပဲ တောက်လျှောက်နားထောင်ပါ။
စစချင်းမှာ တစ်လုံးစ၊ နှစ်လုံးစပဲ နားလည်တယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ စာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာ တစ်ဝက်လောက်နားလည်လာတယ်။ လက်ထဲမှာရေးဖို့ ဘော့ပင်ကို အမြဲမကိုင်ထားနဲ့။ နားယဉ်အောင် နားထောင်ကြည့်မယ်။
၃. အင်္ဂလိပ်ပိုင်းအစီအစဉ် ရုပ်သံ TV ကို အမြဲကြည့်မယ်။
နိုင်ငံခြားဘာသာသင်သူတွေအနေနဲ့ ကလေးအစီအစဉ်တွေကို ကြည့်သင့်တယ်။ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပရိုဂရမ်ကို ကိုယ်ရွေးမယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုပဲဖြစ်သင့်တယ်။ ရုပ်သံမှာ ဗန်းစကားတွေ ဘယ်လိုပြောတတ်သလဲဆိုတာ မှတ်သားထားမယ်။
ဒီခေတ်မှာ ဗီဒီယိုကားတွေကလည်း ဈေးသက်သာ၊ စာတန်းထိုးတွေကလည်း ပါလာပြီ။ အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုးပါ တဲ့ဇာတ်လမ်းမျိုးတွေ ၀ယ်ကြည့်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
မနက်စောစော အိပ်ရာမထတတ်တဲ့ လူငယ်တွေအတွက်
ထိုင်းနိုင်ငံ PTT Public Co.,Ltd မှ ပညာသင်ဆုကိုလျှောက်ထားနိုင်
မှတ်ဉာဏ်ကောင်းအောင် ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ အချက် (၃) ချက်
Shwe Pan Eain